Objectives of Myanmar Press Council
To become Media Business which should be free written, published and Distributed by
Citizen in accordance of State Constitution
To strongly stand as Fourth-Pillar
To fully accept Journalists’ entities and Freedom
To rule Journalists have to obey the duties, ethics, (disciplines) rules and regulations in
Media Business and Organizations
To fulfill every citizens’ right to information
To solve everybody’s complaints and arguments with both side negotiation
regards to any printed / any broadcast in one of the medias
“Media” means activities related to public communication such as gathering, acquiring, possession, recording, analysis and distribution of news in textual, audio, visual, audio-visual, digital data [and] graphics forms by means of print, broadcast or internet or other methods.
Right to information includes the right to interview with and request required information of public interest related to news from any relevant individual, department or organization; the right, in accordance with the bylaws prescribed by the relevant department or organization, to make [photo]copies,to copy computer files, to make photographic or video recordings and so on of required numbers, data, tables/schedules/accounts, images, photographs or illustrations.
Any individual who believes thatamedia outlet has failed to respect the standards set out in this Code of Conduct may lodgeacomplaint with the Media Council. They may also pursueacomplaint directly with the media outlet.
THE COMPLAINTS COMMISSION OF THE MYANMAR PRESS COUNCIL CURRENTLY HAS 23 MEMBERS...
- ရည်ရွယ်ချက်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်
THE CASES OF 2017
Current Cases of 2017
TRANSLATE စဉ် နေ့စွဲ စာဝင်အမှတ် တိုင်ကြားသူလုပ်ငန်း/အဖွဲ့အစည်း အငြင်းပွားမှု/တိုင်ကြားသည့်အကြောင်းအရာ တိုင်ကြားခံရသူ လုပ်ငန်း အဖွဲ့အစည်း ဆောင်ရွက်မှု ၁ ၄.၄.၂၀၁၇ ကစဝ-၁၉/၁၇ ဦးလှဆွေ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းသင့်ကြောင်း အကြံပြုတင်ပြခြင်း။ တိုင်ကြားစာမပြည်စုံသဖြင့် ရုံးလက်ခံအဖြစ်သာ ထားရှိသည်။ ၂ ၆.၄.၁၇ ကစဝ-၂၀/၁၇ ဦးမင်းမင်း အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း တင်ပြစာကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေမြို့ မြို့ပြနှင့် အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန၊ မြို့နယ်ဦးစီးမှူး၊…
TRANSLATE စဉ် နေ့စွဲ စာဝင်အမှတ် တိုင်ကြားသူလုပ်ငန်း / အဖွဲ့အစည်း အငြင်းပွားမှု/တိုင်ကြားသည့်အကြောင်းအရာ တိုင်ကြားခံရသူလုပ်ငန်း အဖွဲ့အစည်း ဆောင်ရွက်မှု ၁ ၁၅.၅.၁၇ ၅.၆.၁၇ ကစဝ-၂၅/၁၇ ကစဝ-၃၉/၁၇ ကစဝ-၄၁/၁၇ ဥက္ကဋ္ဌကိုယ်စား (တင်ထွန်း၊ အတွင်းရေးမှူး)၊ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဦးဟိန်းသွင်ထက်၊ တာဝန်ခံအယ်ဒီတာ၊ နယူးစ်ဖက်ဒရယ်တိုင်းမ် မမှန်မကန်သတင်းထုတ်လွှင့်ဖော်ပြမှုအား အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ရေး News Federal Times…
Resolved Cases - June 2017
TRANSLATE စဉ် နေ့စွဲ စာဝင်အမှတ် တိုင်ကြားသူလုပ်ငန်း/အဖွဲ့အစည်း အငြင်းပွားမှု/တိုင်ကြားသူအကြောင်းအရာ တိုင်ကြားခံရသူလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း ဆောင်ရွက်မှု ၁ ၅.၆.၁၇ ကစဝ-၄၀/၁၇ ဦးအုန်းကြိုင် ရဲသတင်းပေးမလုပ်ရဟူသည့် သတင်းစာကျင့်ဝတ်များကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ပြီး မမှန်မကန်သော လုပ်ရပ်များဖြင့် ပြည်သူအားစိတ်ဆင်းရဲအောင် ပြုလုပ်နေသော မြန်မာနိုင်ငံမှုခင်း သတင်းထောက်များအဖွဲ့ဝင် (မှုခင်းရှုထောင့်ဂျာနယ် သတင်းထောက်) တို့အား အရေးယူပေးပါရန် တိုင်ကြားခြင်း။ ကောင်စီသို့ မိတ္ထူကိုပေးပို့ခြင်းဖြစ်၍ ရုံးလက်ခံအဖြစ်သာထားရှိသည်။ ၂ ၆.၆.၁၇ ကစဝ-၄၂/၁၇ ဦးစန်းလွင် ၊ ဦးရန်နိုင်အောင် (ကျောက်ကြီးမြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး) မီဒီယာကျင့်ဝတ်နှင့် ညီညွတ်ခြင်းမရှိသော အနီရောင်မှုခင်း သတင်းထောက်အား…
International Media Supports
DIPD - Danish Institute for Parties and Demoracy
Center for Law and Demoracy
Local Media Business Groups and Commercial Companies.